Global Voices teny Malagasy » Nanao fihetsiketsehana ny Montenegrina mba hanohitra ny fanafihana mitam-piadiana nihatra tamina mpanao gazety iray ary… · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Mey 2018 5:17 GMT 1	 · Mpanoratra Marko Angelov Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Montenegro, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Eo amin'ny mponina 643 000 eo ho eo, iray amin'ireo firenena kely indrindra any Eorôpa i Montenegro . Hatramin'ny taona 1991, nentin'ny sangany ara-politika iray hatrany ity firenena Balkana ity, notarihin'ny filoha voafidy Milo Đukanović. Milaza ireo mpanao gazety mitatitra momba ny heloka bevava, ny kolikoly, ny fandraharahana sy ny politika milaza fa efa tsy zava-baovao ny fampitahorana sy ny fandrahonana mivantana.
Nitatitra ny Balkan Insigh  fa efa nisy nanafika i Lakic tamin'ny lasa. Tamin'ny taona 2012, notafihan'ny lehilahy iray teo anoloan'ny trano fonenany izy, fotoana fohy taorian'ny nitaterany momba ny zavatra nataon'ny orinasa iray mpanao Sigara ao Montenegro.
Mpanao gazety Sloba Georgiev nampitaha ny toe-javatra tamin'i Slovakia, izay nahitana fihetsiketsehana goavana taorian'ny famonoana ilay mpanao gazety mpanao famotorana, Ján Kuciak  izay nitarika ny fialàn'ny praiminisitra Róbert Fico .
Niantso hetsi-panoherana teo anoloan'ny governemanta ny Fikambanan'ny Mpanao gazety Matihanina ao Montenegro (DPNCG) ny 9 May, ary nanamarika  fa:
Nampiasa ny tenirohy #BezStraha , midika hoe “Tsy misy tahotra”  ireo mpisera media sosialy avy ao Montenegro rehefa nandefa votoaty momba ny fanafihana sy ny fihetsiketsehana.
Olona an-jatony maro, anisan'izany ireo mpanao gazety, mpikambana ao amin'ny antokon'ny mpanohitra sy ny mpikatroka fiarahamonim-pirenena no nanatevin-daharana ny fihetsiketehana 9 May  teo anoloan'ny governemanta. Nilaza ny talen'ny Vijesti, Željko Ivanović fa tsy mahagaga ny heloka bevava tahaka izany ao anatin'ny fiarahamonina izay analàna baraka ho mpamadika ireo mpitsikera ny fitondran'i Milo Đukanović .
Tamin'ny fihetsiketsehana , nilaza i Ivanović fa tsy nitranga io fanafihana io raha toa ka nanao fanadihadiana araka ny tokony ho izy mikasika ny fanafihana an'i Lakic tamin'ny taona 2012 ny manampahefana. Araka ny filazany, nanome fahatsapana ireo andrim-panjakana fa namaha ny fanafihana an'i Olivera Lakić teo aloha izy ireo tamin'ny fisamborana ireo “mahantra sasany avy any amban'ny tanàna”, saingy tsy mbola fantatra mihitsy hoe iza no nanome baiko ny fanafihana ilay mpanao gazety.
“Sarin'i Olivera Lakić: Hisy olona tsy maintsy hamaly izany amin'ny ho avy” – pikantsary tao amin'ny pejin'ny tranonkala Vijesti .
#SafeJournalists #SMCG  manameloka ny fanafihana feno herisetra nihatra tamin'i Olivera Lakić mpiara-miasa aminay, mpanao gazety ao amin'ny @Vijestime  ary manontany ireo andrim-panjakana lehibe hoe: mandra-pahoviana ny mpanao gazety no hatahotra satria te hanao fotsiny ny asany amin'ny fomba tsara izay azony atao izy ireo?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/15/119256/
 Podgorica : https://en.wikipedia.org/wiki/Podgorica
 Nitatitra ny Vijesti : http://www.vijesti.me/vijesti/pucali-u-oliveru-lakic-neko-ce-za-ovo-jednom-odgovarati-987648
 Balkan Insigh: http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegrin-journalist-shot-and-wounded-in-capital-05-08-2018
 famonoana ilay mpanao gazety mpanao famotorana, Ján Kuciak: https://globalvoices.org/2018/03/06/murder-of-investigative-journalist-jan-kuciak-shakes-slovak-society/
 praiminisitra Róbert Fico: https://globalvoices.org/2018/03/18/despite-resignation-of-slovakian-prime-minister-thousands-of-protesters-continue-to-demand-justice-for-murdered-journalist/
 fihetsiketehana 9 May: http://www.vijesti.me/vijesti/ovo-je-pokazatelj-sto-su-ova-vlast-i-dukanovic-licno-napravili-od-ovog-drustva-987685
 Tamin'ny fihetsiketsehana: http://prcentar.me/clanak/do-napada-ne-bi-dolo-da-su-nalogodavci-prethodnog-uhapeni/282